विषालु सर्पले डसेमा कसरी बच्ने ? यो सर्पले टोक्यो भने टोकेको ठाउँ कुहिएर झर्न सक्छ, यसरी अपनाउनुहोस् सावधानी – Khabar PatrikaNp
July 27, 2020 75
काठमाडौँँ, साउन ११ । सावधानी अपनाए सर्पको डसाइको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । सर्पदंश हुन नदिने प्रयाससँगै सावधानी जरुरी रहेको जानकारले औँल्याएका छन् ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मेडिकल विभाग प्रमुख तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सर्पविज्ञ समूहका सदस्य डा सञ्जीव शर्मा : सर्पदंशमा सबैलाई विषालु सर्पले डसेको हुँदैन । कतिपयमा विषालु सर्पले विष प्रवाह गर्दैन । सर्पले आत्मरक्षामा डस्दा मात्र विष छाड्छ । त्यसैले अस्पताल आएका ९० प्रतिशत बिरामीमा विष हुन्न ।
कडा विष भएको करेतले प्रायः मानिस सुतेका ठाउँमा र जम्काभेट भएका ठाउँमा डस्छ । तराईमा हुने अत्यधिक करेतको डसाइ राति भुइँमा खुला सुतेका व्यक्तिमा हुने गरेको पाइएको छ । सानो सर्पलाई मानिसको हात, खुट्टा वा शरीरले थिच्दा चोट लाग्छ । राति टोकेको थाहा नपाउँदा बिहान बिरामीको अवस्था पक्षघात जस्तो हुन्छ । जसलाई बचाउन कठिन पर्छ । करेतबाट बच्न खाटमा झुल हालेर सुत्ने र टोकेको शङ्का लागेमा तत्काल अस्पताल जानुपर्छ । करेतले टोकेको चिह्न देखिन्न तर गोमनले टोक्दा घाउ देखिन्छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
तराईमा बाघे सर्पको बिगबिगी यहीबेला हुन्छ । यसले टोकेमा शरीरमा रक्तस्राव हुन्छ । समयमै उपचार नपाए रगतको कम हुने र दिमागमा रगत जमेर बिरामीको मृत्यु हुन्छ । पहाडतिर पाइने हरेउ सर्पको डसाइमा विष कम हुुन्छ । यसको टोकाइबाट सुन्निने, दुख्ने, रक्तस्राव हुने र टोकेको ठाउँ कुहिएर झर्ने सम्भावना हुन्छ । हिमालमा पाइने हिमालयन करेतमा पनि कडा विष हुन्छ । हिमालको सर्पमा विष हुन्न भनेर लापरबाही नगर्न उनी सुझाउँछन्
Prevपीएसजीको जितमा चर्चित ब्राजिलियन खेलाडी नेमारको निर्णायक गोल
Nextसाउनको दोस्रो सोमबार पनि पशुपतिनाथ मन्दिर नखुल्ने !
बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्ष चयन !
शिशुको आमाले म पाल्न सक्दिन, खोलामा फाल्दिन्छु” भन्दै आमा वडा कार्यालय पुगेपछि… हेर्नुहोस् भिडियो
भगवान शिवको अघोरी रुप बारेरोचक कुराहरु जुन ,तपाईलाई थाहा छ…? ! हेर्नुहोस
कोरियन प्रविधिबाट छोटो अवधिमै १२ लाख मात्र खर्च गरि नेपालमै बनाउन सकिन्छ यति सुन्दर अनि आकर्षक घर !